किन बन्छन् रियालिटी शोहरू व्यावसायिक ? - Naya Online
किन बन्छन् रियालिटी शोहरू व्यावसायिक ?
आइतवार, साउन २४, २०७८ (August 8th, 2021 at 9:25pm ) ब्रेकिंग न्युज, ब्लग
नेपालमा ब्राइटर तिम्रो सुर मेरो गीत मैले थाहा पाएको पहिलो रियालिटी शो हो । त्यसपछि नेपाली तारा, नेपाल आइडलहुँदै दि भोइस अफ नेपालसम्म थाहा पाइयो, हेरियो । यहाँसम्म आइपुग्दा यस्ता शोहरूबाट नेपालले थुप्रै कलाकार जन्माइसकेको छ । यो सारा नेपालीहरूको लागि गौरवको कुरा हो ।
यी शोहरू विभिन्न कारणवस बेलबेला विवादमा नआएका पनि होइनन् । विवादमा आउनु पनि स्वभाविक हो । यस्ता शोहरू नयाँ र लुकेका प्रतिभा खोजेर उजागर गर्ने हेतुले निर्माण भएको भान थियो, हामी आम नेपालीलाई । केहिहदसम्म यसको उद्देश्य त्यस्तै भएतापनि अहिले आएर यस्ता शोहरू व्यावसायीक बन्दै गएको हामीमाझ लुक्न सकेको छैन । व्यावसायिक बनेपछि विवाद पनि सँगसँगै आएको देखिन्छ ।
एकजना व्यक्तिले केहिँदिन अघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, नेपाल आइडलमा बुद्ध लामालाई जिताउन एकजना व्यक्तिले एक्लै ५ लाखको भोट गरेका थिए रे, अहिले सम्झिँदै हाँस्छन् रे ! लगभग चार वर्ष पहिलेको कुरा नेपाल आइडलमा जीतहारका लागि एक व्यक्तिले यति खर्च गरेछन् । उनिहरूभन्दा बढि खर्च गर्ने व्यक्ति पनि थिए होलान् नेपथ्यमा । त्यसपछि यो जित्ने जिताउने प्रणाली त हामी सबैलाई थाहा छ । चार पाँच वर्ष अघि एकजना व्यक्तिले लाखौँ खर्च गरेछन् भने अहिले कल्पना गरौं न एक व्यक्तिले कतिसम्म खर्च गरे होलान् ?
हिजो भएको भोइस अफ नेपाल सिजन ३ को फाइनल राउण्डमा पुगेका ४ प्रतिस्पर्धिमध्ये टिम प्रमोदबाट किरण गजमेर, टिम राजुबाट तारा श्रीष मगर, टिम दिपबाट ज्वाला राई र टिम तृष्णाबाट आर्यन तामाङ थिए । जसमध्ये टिम प्रमोदबाट किरण गजमेर विजयी बने र बाँकी ३ जना उपविजेता बने ।
‘गौथली चिरेबिरी गर्दैन त्यो होइन गौथली’ बोलको गीत गाएका किरण स्टेजमा निकै कन्फिडेन्स देखिन्थे । ‘कम्मरमाथि पटुकी’ गीतमा तारा प्रस्तुत भएकी थिइन् । ज्वालाले ‘तुलसी आँगनमा रोपौंला’ उस्तै मिठो गाए भने आर्यन तामाङले ‘मेरो आँखाभर दिन’ बोलको गीत गाए । सबैको प्रस्तुति राम्रो थियो । गीतको मर्म अनुसार सबै प्रतिपर्धीले राम्रो प्रस्तुति दिएका थिए ।
मैदानमा उत्रिनु भनेकै हारलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नु हो । सबैको जीत हुँदैन । अहिले आएर केहि व्यक्तिहरू यो निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । जुन ठीक हैन । हामी विरोध गर्ने हो भने सिस्टमको विरोध गरौं न ! एक व्यक्ति एक भोट हुनुपर्छ भनौं । हामी सबै आआफ्नो प्रतिस्पर्धी जिताउ अभियानमा जुटेका थिएनौं र ? अनि अहिले आएर डलरको पावरले जित्यो भन्नुको के अर्थ होला र ?
पावर प्रयोग हुने सिस्टम त हामीले स्वीकार गरेकै छौं । स्वीकार नभए किन जिताउ अभियान सुरु गर्ने थियौं होला र ? बरु वहिस्कार गरौं न यस्ता अभियानहरू । यस्ता अभियानहरूले एक गरिबको कला मारिरहेको छ भन्ने त सर्वविदितै छ । त्यसैले सिस्टमको विरोध गरौं । धन उडाएर जित भएपछि धनीले जित्यो भन्नुको कुनै तुक छैन । जेको माध्यमबाट लडेको हो त्यसको हारजित त अवश्य हुन्छ ।
यहि सन्दर्भमै चर्चित कवि चन्द्रवीर तुम्बापोले पुँजीवादको फम्र्याटमा आफू पनि छिरिसकेपछि आयोजक या सहभागीलाई गाली गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तुम्बापोका अनुसार नोटको नदि जसले बगाउँछ, जित्ने उसैले हो ।
चर्चामै रहेका एकजना गायकलाई भोइसको रिजल्टबारे प्रश्न राख्दा उनले भने –‘मलाई खासै चासो छैन, हर्ष न विस्मात् । किनकी रियालिटी शोहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने बारेमा जानकार छु । फेरि पछिल्लो समय रियालिटी शोले उत्पान गरेका प्रतिभाहरू बर्खाको भेलजस्तो मात्रै छन् ।’ यसको मतलब हो सिस्टमलाई नै अस्विकार गर्न सक्नुपर्छ । नितान्त कला र क्षमताले विजयी बन्ने वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
यसो भनिरहँदा हार्नुपर्ने मान्छेको जित भयो भन्न खोजेको हैन, भोटको माध्यमबाट मात्रै नभई निर्णायकबाटै निर्णय गर्नुपरे पनि विजयी बन्नसक्ने प्रतिभा हुन् उनी । भोइसको भोटिङ चरणसम्म पुग्नु सबै प्रतिस्पर्धीहरूका लागि नै जित हो ।
महत्वपूर्ण कुरो त यो हो कि, नेपालको जनसंख्याअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कति छन् ? कति व्यक्तिले यस्ता कार्यक्रम हेर्छन् र उनीहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर भोट दिन्छन् ? त्यसरी हेरिँदा त पाएको भोटको आधारमा भएको जीत असली जीत हुन जान्छ । जब एकै व्यक्तिले खर्च गरेर हजारौं भोट दिन सक्छ, त्यो तामझाम पूँजीवादको फम्र्याट हो । जसले कला र गलासँग सम्पति पनि अनिवार्य जोडेर ल्याउँछ ।